ဘာသာစကား မြန်မာ(Unicode) မြန်မာ(Zawgyi) English
သင်၏စီးနင်းမှုအတွက် ပိုမိုသော ရွေးချယ်မှုများ
အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော တက္ကစီ ကုမ္ပဏီများ၊ မိတ်ဆွေယာဉ်မောင်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောကြောင့် သင့်ခရီးစဉ်အတွက် ရွေးချယ်မှုများစွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
FastGo မှ များစွာသော ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းများကို စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ FastGo အသုံးပြုသူ ခရီးသည်အားလုံး ခရီးစဉ်တိုင်းတွင် ၅ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ Cash Back ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
FastGo မှ သင့်အတွက် ခရီးစဉ်တိုင်းတွင် များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်တဲ့ Fast Protection ဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။ ( အများဆုံး သိန်း ၂၀ ကျပ်အထိ ) ဒါကြောင့် သင့်ခရီးစဉ်တိုင်း လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အဝ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်သွားမည့်ခရီးစဉ်အတွက် အငှားယာဉ်တစ်စီး ဘွတ်ကင်လုပ်မလို့လား? များစွာသော အငှားယာဉ်အမျိုးအစားများ၏ဖုန်းနံပါတ်များအားမှတ်သားထားရခြင်း(သို့)ယာဉ်စီးခ ဈေးနှုန်းများပြောင်းလဲမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်မည့်အစား FastGo နှင့် ဘွတ်ကင်လုပ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် သင်သွားမည့်ခရီးစဉ်ကို မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ဖြင့် ရောက်ရှိစေမှာပါ။.
လူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာသည် FastGo အားချိတ်ဆက်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သွားလိုရာနေရာ တိုင်းအတွက် အဓိကပို့ဆောင်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ သင်သွားလိုရာခရီးစဉ်အတွက် ဘတ်စ်ကားတွေ မြို့ပြအငှားယာဉ်တွေဆီကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်သွားစီးနင်းရန်မလိုအပ်တော့ပေ။FastGo ကိုသာအသုံးပြုလိုက်ပါ။
ရွေးချယ်ရန်အဆင့် ၂ ခုသာရှိပါသည်။သင်၏ ခရီးစဉ်စတင်ရန်အတွက် ယာဉ်မောင်းအား မိနစ်အနည်းငယ်သာ စောင့်ဆိုင်းရပါမည်။.
သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ကားပုံစံ၊ကားအမျိုးအစား၊ကား၏ဝန်ဆောင်မှုများအား ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။.
Application ပေါ်တွင် လွယ်ကူသွားလာနိုင်သောလမ်းကြောင်းများကို အကောင်းဆုံးစီးနင်းနိုင်ရန်ပြသထားပါသည်။ခရီးစဉ်တိုင်းအတွက်လည်း Fast Protection အာမခံအစီအစဉ်များကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းများ(သို့)ငွေသားမလုံလောက်ခြင်းများအားစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်တော့ပေ။ FastGo မှငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။.
အကဲဖြတ်ခြင်း - နားထောင်ခြင်း
သင်၏ခရီးစဉ်အတွက် အဆင်ပြေမှုရှိမရှိကို အကြောင်းပြန်ပေးခြင်း၊အကဲဖြတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် FastGo ဝန်ဆောင်မှုစနစ်အားတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
သင်စီးနင်းခဲ့သော ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အချိန်၊တည်နေရာ၊ကားအချက်အလက်နှင့်ဈေးနှုန်း။.
အဆင့် ၁ - အက်ပလီကေးရှင်းအား ထည့်သွင်းပါ။
FASTGO အက်ပလီကေးရှင်းကို App Store သို့ Google Play တို့မှတစ်ဆင့် သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ပြီးပါက အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါ။.
အဆင့် ၂ - စီးနင်းရန်အတွက် ဘွတ်ကင်ပြုလုပ်ခြင်း
သင်သွားလိုသည့် ခရီးစဉ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်၍ သွားလိုသည့်နေရာကို ဖြည့်စွက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ကျသင့်ငွေနှင့်ယာဉ်မောင်းအားစောင့်ရမည့်အချိန်ကို မြင်တွေ့ရမှပါ။.
အဆင့် ၃ - ခရီးစဉ်
သင်စီးမည့်ကားတွင် ယာဉ်မောင်း၏အချက်အလက်နှင့်ကားအမျိုးအစားအသေးစိတ်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။သင့်ကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်မည့်ကားလမ်းကြောင်းကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။.
FASTGO ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
FastGo Myanmar Co.,Ltd © 2018 FASTGO. ALL RIGHTS RESERVED
Business registration No. 0108253207 is licensed by Hanoi Department of Planning and Investment on 27th April, 2018